မိန်းကလေးတွေသတိထားကြရမဲ.အကောင်. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မိန်းကလေးတွေသတိထားကြရမဲ.အကောင်.
Posted by ရွှေဘိုသား on Jan 26, 2011 in Myanma News, News | 11 comments
အကောင်.တွေဖြစ်တဲ. jokerboy2011@gmail.com, htetaung92@gmail.com
ဒီလိုလူမျိုးတွေ ဘယ်လောက်တောင် များနေပြီလဲမသိဘူး။ နက်ဆိုင်တွေလည်း စည်းကမ်းတင်းကြပ်ပြီး နှိမ်နင်းသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဟိုးတလောက အခွေတွေတောင် ထွက်လာသေးတယ်ကြားတယ်…။ ဒီဘက်က လုပ်ပြလိုက် ၊ ဟိုဘက်က လုပ်ပြလိုက်နဲ့ အင်တာနက်ထဲက မင်းသား ၊ မင်းသမီး အခွေတွေ အကြောင်းလေ…။ ခိုးကူးခွေအနေနဲ့ ဖြန့်တယ်လို့လဲ သူငယ်ချင်းတယောက်က ပြောတယ်…။
အင်တာနက်စသုံးခါစက ကောင်လေးတစ်ကောင်nick နဲ့ အဲ့လိုပုံတွေပို့ဖူးတယ်…။ နောက်တော့ filter နဲ့စာတွေစစ်ထားတော့မှ စာတွေမ၀င်တော့တာ.. ကြာပြီဆိုတော့ သူ့ nick တောင် မမှတ်မိတော့ပါဘူး ။
on line ပေါ်စရောက်တုန်းကအတွေ့အကြုံလေးပါ။ဒါကိုနမူနာယူပြီးတော့နောင်ဆိုဘယ်သူလဲဆိုတာ
အဲ့လိုဇာတ်လမ်းတော့မဟုတ်ဘူး တခြား အင်တာနက်ဇာတ်လမ်းတွေ တင်ပေးဦးမယ် ။ ဒါမှ လူလိုနားလည်ကြမှာ ။ မဟုတ်ရင် အလကား အင်တာနက်သရဲတွေများနေလွန်းလို့ ။
လူငယ်တွေအတွက် ဆိုင်ကို စည်းကမ်းတင်းကြပ်ခဲ့လို့ အင်တာနက်ဆိုင် ပြုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်..။ ကိုယ်တွေ့ပါကွယ်.။
အဆင့်မရှိတဲ့ လူတွေ၊ နောက်ဘ၀ကျ လူမဖြစ်ပါစေနဲ့တော်။
လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေပါပဲ……… သူမထိန်း ကိုယ်မထိန်းလုပ်လို့တော့ မရဘူးပေါ့ဗျာ… ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ… အွန်လိုင်းရောက်လာလဲ အရှက်တရားလေးတွေတော့ ထားသင့်ပါတယ်………. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နစ်နာစရာရှိရင် မိန်းကလေးကပဲ နစ်နာရတာလေ…. အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းတာပဲ အကောင်းဆုံးပါဗျာ……..
မသင့်တော်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်တောင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ သင့်တော်တဲ့အကျင့်တွေပျောက်မသွားစေနဲ့ တဲ့ ဆုံးမစာတစ်ခုဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်
အခုတော့ အွန်လိုင်းမှာ ချက်တင် ပြောရမှာတောင် ပျင်းတယ်။
စိတ်ထဲမှာ အာရုံ မလာဘူး စကားပြောရတာ.. စိတ်ပါလက်ပါ ဖိုရမ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို နောက်တယ်။ ဂေဇတ်မှာ အာရွီးတယ်။ အခုတော့ ကိုယ်ပိုင် ဆိုက်မှာ ရေးတယ်။ အားတောင် မအားဘူး။
ကျွန်တော်ကိုကောင်မလေးအထင်နဲ့ အဲဒါတွေလာပြောနေတယ် … အစကတော့ မှင်နဲ့ပဲ ကောင်မလေးပုံစံနဲ့ပြောနေတာ နောက်တော့မေးထဲကို ပုံတွေ စာတွေပို့တယ် …. နောက်နေ့ကျတော့ ကျွန်တော်လည်း ကောပစ်လိုက်တယ် .. နှမချင်းမစာမနာနဲ့ ပက်ပက်စက်စက်ပဲဗျာ .. သတိထားကျနော်